लगातार दुई दिन दोहोरो अंकले घटेर २६०० विन्दु तल झर्‍यो नेप्से, कारोबार रकमको उच्चता कायमै
फागुन ११, काठमाडौं । नेप्से परिसूचक निरन्तर दुई दिन लगातार दोहोरो अंकले घटेर २ हजार ६०० विन्दु तल झरेको छ ।
सोमवारदेखि घटेको बजारले मंगलवार पनि निरन्तरता पाएको हो । सोमवार ३२ दशमलव ६७ अंकले घटेको बजार मंगलवार २१ दशमलव १६ अंकले घटेको हो । आइतवार २ हजार ६४० दशमलव ३४ विन्दुमा पुगेको नेप्से परिसूचक दुई दिन लगातार घटेर २ हजार ५८६ दशमलव ५१ विन्दुमा झरेको हो । दुई दिनमा नेप्से परिसूचक ५३ दशमलव ८३ अंकले घटेको हो ।
मंगलवार २ हजार ६२७ दशमलव ३४ विन्दुदेखि खुलेको बजार २ हजार ५१९ दशमलव ४२ विन्दुसम्म झरेर फेरी उकालो लागेर बन्द भएको हो । नेप्से परिसूचकले उच्च विन्दु कायम गरिरहँदा लगानीकर्ताहरुको मनोबल पनि कमजोर हुँदैं गएको अनुमान विश्लेषकहरुले लगाएका छन् ।
लगानीको मूल्य बढीरहँदा घट्ने हो कि भन्ने आशंकामा लगानीकर्ताहरुको मनोबल कमजोर भएको उनीहरुको तर्क छ । पूँजीबजारमा लगानी गरी नाफा आर्जन गर्न चाहनेले आत्तिनु पनि नहुने र मात्तिनु पनि नहुने सुझाब जानकारहरुको छ ।
मंगलवार शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचकसँगै ठुला कम्पनीहरुको मात्र कारोबार मापक सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि २ दशमल ४१ अंकले घटेको छ । नेप्से परिसूचक ओरालो लागेपनि बजारमा कारोबार रकमको उच्चता भने कायमै रहेको छ ।
मंगलवार पनि रू. ८ अर्ब ५६ करोड १५ लाख ३९ हजार बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । उक्त रकम बराबरको १ करोड ७७ लाख १४ हजार ९१२ कित्ता शेयर कारोबार भएको हो । यो दिन २०५ ओटा कम्पनीको ८३ हजार ३५७ पटकको कारोबारमा उल्लेखित शेयर कारोबार भएको हो ।
कारोबारको सातौं दिनसम्म उच्च मूल्य वृद्धि भएको उक्त कम्पनीको आठौं दिन मंगलवार भने मूल्यमा उच्च गिरावट आएको हो । यो दिन कम्पनीको शेयरमा उच्च विक्री चाप देखिएपछि मूल्यमा असर परेको हो । सोमवार रू. ६६० कायम भएको कम्पनीको अन्तिम मूल्य मंगलवार प्रतिकित्ता रू. ६६ ले घटेर अन्तिम मूल्य रू. ५९४ मा झरेको छ ।
यसदिन व्यापारिक समूह बाहेकका सबै परिसूचक घटेको छ । व्यापारिक समूहको भने शून्य दशमलव ९ प्रतिशतले परिसूचक बढेको हो । यो दिन नेपाल फाइनान्स, अपि पावर, लिवर्टी इनर्जी कम्पनी र हिमालयन पावर पार्टनरको शेयरमूल्य ९ प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ ।
निफ्राको कारोबार खुला, ४.८८ % मूल्य वृद्धि [२०७७ फागुन, १२]
तेस्रो घण्टामा ०.९१% ले बढ्यो बजार, नेपाल बैंकको सर्वाधिक कारोबार (२ बजेको अपडेट)[२०७७ फागुन, १२]
२.३५ % घट्यो नेप्से, ४ अर्बभन्दा बढीको शेयर खरीदविक्री( १ बजेको अपडेट) [२०७७ फागुन, १२]